Mawjadaha qabow ee Isbaanishka: dhammaan bulshooyinka heeganka ku jira marka laga reebo Jasiiradaha Canary | Saadaasha Shabakadda
Monica Sanchez | | Hirar qabow, Saadaalin
Dadka ku nool magaalada Bunyola, ee Serra de Tramuntana (Mallorca).
La mowjado qabow in aan ku nool nahay xilligan Spain waxay uga tegayaan barafka heerar aad u hooseeya iyo meelaha aysan dhacdadan badanaa ka dhicin, sida in badan oo ka mid ah Jasiiradaha Balearic iyo bulshada ku nool xeebta badda dhexe.
Maanta, Arbaco, Janaayo 18, bulshooyin badan ayaa heegan ugu jira kuleylka hoose, dabaysha iyo barafka.
1 Saadaasha maanta Janawari 18
1.3 Bad xun
2 Saadaasha berri, Janaayo 19
2.3 Bad xun
Saadaasha maanta Janawari 18
Maalintan heerkulka illaa 12 darajo oo ka hooseeya eber ayaa la filayaa meelaha Aragon, Catalan Pyrenees, Albarracín, Jiloca, Gúdar, Maestrazgo iyo Iberian Zaragoza. Gobollada Ávila, Burgos, León, Segovia, Soria iyo Zamora waxay ku jiraan heeganka liinta ee heerkulka u dhexeeya -10 iyo -11ºC. In Palencia, Salamanca iyo Valladolid waxaa jira digniin jaalle ah oo ku saabsan dhaxan udhaxeysa 6 iyo 9 darajo oo ka hooseeya eber.
In kasta oo heerka barafka uu sii joogi doono maanta inta u dhexeysa 0 iyo 300 mitir, haddana waxaa jira heegan loogu talagalay barafka Almería iyo koonfur-galbeed ee Murcia.
Xeebaha badda dhexe iyo sidoo kale jasiiradaha Balearic badda ayaa sii ahaan doonta mid aad u deggan, oo leh dabayl woqooyi-bari iyo kala-goyn xoog 8, taas oo doorbidi doonta sameynta hirarka illaa 5 mitir sare.
Saadaasha berri, Janaayo 19
Bulshooyinka qeybta waqooyi ee gacanka, iyo sidoo kale kuwa ku teedsan xeebta badda dhexe, waxay ku jiri doonaan heegan sababo la xiriira heerkul heer sare ah oo gaaraya -15ºC oo ah meelaha Pyrenees iyo Iberian System. Meelaha gudaha jasiiradda, heerkulku kama kici karo 5ºC, halka dalka intiisa kale ugu badnaan ilaa 15ºC laga filayo badda Mediterranean iyo ilaa 20ºC jasiiradaha Canary, oo aan mowjaddu saameyn ku yeelan qabow.
Marka laga hadlayo halista barafka, Albacete, Murcia, Almería, Alicante iyo Valencia ayaa ku jiri doona heegan hurdi ah.
Berri xaaladdu waxay bilaabi doontaa inay ka soo fiicnaato Jasiiradaha Balearic, oo feejignaan ku jiri doona, markanna waa hurdi dabaysha iyo badda oo kacsan oo hirarkeedu yahay 2-3 mitir. Xeebta Mediterranean-ka xaaladdu waxay noqon doontaa mid cakiran, gaar ahaan xeebta Valencian oo ay ugu wacan tahay dabeyl xoog leh iyo mowjado gaaraya 5 mitir.
Xaaladda ayaa la filayaa inay hoos u dhacdo illaa 20-ka Janaayo. Waxaa jira wax ka yar 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Hirar qabow » Mawjad qabow oo Isbaanish ah: waddanka qaboojiyay (marka laga reebo Jasiiradaha Canary)